Banyere Anyị - Hebei Zebung Rubber Technology Co., ltd.
Hebei Zebung Rubber Technology Co., Ltd e hiwere na 2003 na emi odude ke mmepe mpaghara nke Jing County, Hebei Province, China.
ZEBUNG webatara usoro 4 nke Italian VP nke ụlọ ọrụ na-emepụta mmiri sooks, mekwa ka eriri mmiri na-emepụta mmanụ maka eriri mmiri buru ibu.
ZEBUNG gbakwunyere usoro ụzọ abụọ nke usoro mmepụta nke ọkpọkọ mmiri, yana ihe karịrị usoro 20 nke ule na akụrụngwa nyocha.
ZEBUNG kwadoro na Institute of Ocean Engineering nke China University of Petroleum. N'otu afọ ahụ, dịka iwu siri ike nke Council Council na nchedo gburugburu ebe obibi, a bịara sonye ụlọ ọhụrụ nke ebe agwakọta.
Zebung akwadola asambodo OCIMF-GMPHOM 2009 nke BV gosipụtara.
Mgbe ihe karịrị afọ 17 na-eto ngwa ngwa, ZEBUNG na-arụ ọrụ dị ka onye ndu teknụzụ. ZEBUNG 'debara aha isi obodo na-ebili 59 nde, mkpara n'elu 150 ọrụ, 10 nnyocha sayensị pesonel, 3 agadi injinia, ihe karịrị 120 tent nke mmepụta akụrụngwa.
Ngwaahịa ZEBUNG bụ: nnukwu-mmanụ mmanụ sooks (mmanụ ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri / mmiri na-ese n'elu mmiri, mmanụ na-ese mmiri / ọdụ ụgbọ mmiri / eriri STS); nnukwu dayameta dredging sooks (sere n'elu dredging / Short dredging nnyefe sooks); ulo oru roba sooks - FDA nri sooks / UHMWPE chemical roba sooks / haịdrọlik mmanụ sooks / tank ụgbọala sooks / sandblasting sooks / ihe sooks / uzuoku sooks / mmanụ mmanụ sooks na na. Ngwaahịa niile enwetala BV ISO9001: asambodo asambodo mba ofesi 2015. Ugbu a, ZEBUNG kwadoro nke BV - OCIMF ọkọlọtọ GMPHOM 2009 asambodo maka eriri mmiri na asambodo FDA.
"Boutique" bụ ụkpụrụ ọrụ ZEBUNG, "iguzosi ike n'ezi ihe" bụ isi nkuku akara nke ZEBUNG, "klaasị mbụ" bụ ebumnuche ZEBUNG, ZEBUNG na-agbaso mgbe niile "ịdabere na teknụzụ dị elu na talent iji mepụta ụlọ ọrụ site na njikwa na ọrụ dị elu" Anyị na-anwa ike anyị kacha mma kwalite mmepe ụlọ ọrụ sooks ma nye ike anyị niile.